Google wuxuu ku darayaa shaqooyin cusub si uu ugu raaxeysto buugaagtaada maqalka ah | Wararka Gadget
Ruben gallardo | | Akhristayaasha
Bilowgii sanadkan 2018, Google wuxuu bilaabay balanqaadkiisa buugaagta maqalka. Waxay ka furtay qayb ka mid ah buugaagta laga sheekeeyay dukaankooda Google Play sidaasna buugaagtu waxay u gaarsiinayaan dad badan. Laba bilood kadib, Google wuxuu ku darayaa shaqooyin cusub si uu ugu raaxeysto cinwaanadan xitaa inbadan.
Buugaagta maqalka ee Google ayaa ka maqnaa xoogaa horumar ah si ay ugu raaxeysan karaan cinwaannada wakhti kasta. Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in shirkadda internetka ay si fiican u shaqeyneyso iyo khibradda isticmaale ee la hagaajiyay oo leh hawlo cusub oo aad ugu raaxeysan karto labadaba Android iyo iOS.
Marka ugu horeysa ee lagu daro waa waxa loogu yeero "Cusboonaysiinta Smart". Hawshan ayaa sameyn doonta waligaa ha lumin dunta wax kasta oo aad maqasho ee ku saabsan sheekada aad ku dhex milmayso. Waxaa intaa dheer, markaad isticmaaleysid taleefan casri ah si aad sidaas u sameyso, waxaa hubaal ah inaad yeelan doonto wax ka badan hal hakad inta lagu gudajiro sheekada (wicitaanada qaar, digniinta qaar, iwm). Xaaladdan oo kale, muuqaalkan cusub wuxuu si caqli gal ah dib ugu laaban doonaa eraygii ugu dambeeyay ee aad ka maqli karto sheekada.
Second waxaan yeelan doonaa waxaan yeelan doonnaa calaamado ama «Calaamado». Waana inaan awood u yeelano inaan calaamado ku dhigno tuducyada na calaamadeeyay ugu badan ee sheeko si aan uga soo kabanno, waa wax aan qiime lahayn. Iyo wax kayar kuwa loo bartay inay had iyo jeer qalin iyo warqad wataan.
Mar saddexaad, waxaan fursad u heli doonnaa inaan ku darno buugaagta maqalka ee Google howlaheena maalinlaha ah iyo otomaatiga aqrinta - ama dhageysiga - Caawiye Google. Taasi waa, kaaliyaha kumbuyuutarka ee Google wuxuu ku dari doonaa buugga maqalka sidii wax maalin kasta subaxdiina ah. Waxaad sidoo kale kordhin kartaa ama yareyn kartaa xawaaraha sheekada si aad ugu haboonaato baahiyahaaga.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, buugaagta maqalka ah ee aad ku iibsatay Google Play waad wadaagi kartaa qoys ahaan. Dhaqdhaqaaq ay Apple horey u lahayd in muddo ah howlaheeda la wadaaga waxyaabaha ku jira koontada qoyska. Tan waxaa lagu sameyn karaa mahadsanid shaqada "Maktabada Qoyska" o Maktabada Qoyska waxaana lagu soo daray 13 wadan, oo ay ku jirto Spain.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Akhristayaasha » Google waxay kudareysaa sifooyin cusub si ay ugu raaxeystaan ​​buugaagtaada maqalka
Tikniyoolajiyadda laser-ka ayaa awood u leh inay soo saarto cod aan meelna oolin
Tess, baaritaanka hawada sare oo ka caawin doona NASA inay nolol ka raadsato 20.000 kun oo exoplanets ah